बलिउड / हलिउड Archives - Page 29 of 42 - Purbeli News
मोटोपनाका कारण रातभर रुन्थिन भारती
मुम्बई। भारती सिंह भारतीय टिभी इण्डट्रिजकी पहिलो स्ट्याडअप कमेडिण्न हुन्। २०१६ मा फोब्र्सले टप १०० कमेडियन्सको लिस्ट जारी गरेको थियो। जसमा भारती ९८ औं स्थानमा रहन सफल भइकी थिइन्। तर, तपाइँलाई थाहा छ ? आज सबैलाई हसाउने भारती कुनै समय आफ्नो मोटोपनका कारण रातभर रुने गर्थिन्। भारतीले भारतीय अनलाइन संचारमाध्यम दैनिक भास्कार डटकमसँग कुरा गर्दै आफ्नो जीव...
विवाह बन्धनमा बाँधिदै सोनाक्षी सिंहा !
एजेन्सी। बलिउडकी ‘दवंग गर्ल’ अर्थात् नायिका सोनाक्षी सिंहा विवाह बन्धनमा बाधिन लागेको हल्ला ले यतिबेला बलिउड तातेको छ । बलिउड लाइफ डटकमका अनुसार सोनाक्षी सिंहा आफ्नो प्रेमी बन्टी सचदेवसँग विवाह गर्ने तयारी गरेको बताइए छ । लामो समयदेखि एक आर्कालाई डेट गरिरहेका उनीहरु छिट्टै नै विवाह बन्धनमा बाधिने तयरीमा रहेको बताइएको छ । एक रिर्पोटका अनुसार सोनाक्...
आमा बन्दै सनी लियोन
एजेन्सी– पूर्वपोर्नस्टार तथा बलिउड अभिनेत्री सनी लियोन आमा बन्ने भएकी छिन् । उनले हालै एउटा अन्तर्वातामा आफू आमा बन्न लागेको खुलासा गरेकी हुन् ।आमा बन्न शारीरिक रूपमा आफूलाई मुस्किल हुन सक्ने बताउने सनीले आफ्नो जिन्दगीमा अहिले धेरैथोक भएको अपूरो कुरा गरेकी छिन् । ‘कसले भन्न सक्छ कि यो हुन सक्दैन, म केही दिनमा आफ्नो हातमा एउटा बच्चा लिएर आऊँ अनि मान...
पति अर्कैसँग सल्किएपछि नायिकाद्वारा आत्महत्या
नयाँदिल्ली। टेलिभिजको पर्दामा चर्चित भारतीय अभिनेत्री तथा गायिका बिदिशा बेजबरुआले दिल्लीको गुडगाउँस्थित आफ्नै घरमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेकी छन् । २६ वर्षीया बिदिशाले सोमवार राति आत्महत्या गरेकी हुन् । बिदिशा गुडगाउँको सेक्टर ४३ स्थित एक अपार्टमेन्टमा बस्थिन् । बिदिशा ५ जुलाईमा यो फ्ल्याटमा सरेकी थिइन् । बिदिशा एक वर्ष अगाडि मात्रै विवाह बन्धनमा बा...
जब मोडलले पबित्र स्थलमा कपडा उतारिन्, यसरी मच्चियो हंगामा
एजेन्सी। हलिउडकी चर्चित मोडल जेलिन कुक आफ्नो बोल्ड फोटोशुटका लागि निकै चर्चामा आउँछिन् । उनी एक प्लेब्वाय मोडल हुन् । जो प्लेब्वाय म्यागेजिनका लागि न्यूड फोटोशुट गर्छिन् । तर, सोही काम उनलाई यसपटक निकै भारी परेको छ । फोटोशुट गर्नका लागि जेलीन पहाडमा गइन्, जहाँको फोटो भाइरल भयो र हंगामा मच्चियो । जुन फोटोमा भद्दा खालका कमेन्टहरु आए । तर, उनले न्युड...
काठमाडौं । २०१७ आधा भन्दा बढी वितिसकेको छ । र पनि मानिसहरु यो बर्षको सबैभन्दा बढी ब्लकबस्टर फिल्मको पार्खाइमा छन् । ‘बाहुबली–२’, ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’, ‘जाली एलएलबी–२’, ‘काबिल’ र ‘हिन्दी मिडियम’ लाई छोडेर अन्य फिल्मले कुनै चमत्कार गर्न सकेनन् । यो अवस्थामा फिम मेकर्सको नजर अब २०१८ मा छ । यही कारण अगामी बर्ष ठूलो पर्दामा केही नयाँ जोडि देखिनेछन् ।...
न्यूयोर्कमा जब प्रियंकालाई एडामले चक्कु हान्न खोजे…
एजेन्सी। बलिउड चलचित्र नगरी भन्दा हलिउडमा व्यस्त हुन थालेकी नायिका प्रियंका चोपडालाई मंगलबार न्यूयोर्कको सेन्ट्रल पार्कमा मिडियाले क्यामेरामा कैद गरेको छ । नायिका प्रियंका चोपडा र हलिउड स्टार एडाम डिभाइन सेन्ट्रल पार्कमा नयाँ चलचित्रको छायांकनमा व्यस्त थिए । एक दृश्यमा प्रियंकालाई एडामले पछाडिबाट चक्कु हान्नुपर्ने दृश्य थियो । सो दृश्य छायांकनका क...
एजेन्सी । भारतीय फिल्म क्षेत्रमा कमाईको नयाँ रेकर्ड बनाउन सफल एसएस राजमौलीको फिल्म बाहुबली रिलिज भएको दुई बर्ष पुरा भएको छ । बाहुबली र बाहुबली २ को सफलतापछि फिल्मका हिरो प्रभास पनि हरेक फिल्म निर्माताको रोजाईमा परेका छन् । प्रति फिल्मका लागि उनले आफ्नो शुल्क पनि बढाएर ३० करोड पुर्याएका छन् । हाल उनीसँग करिब १८० करोड बराबरको व्यक्तिगत सम्पति रहेको छ...
फिल्मी उद्योगमा यस्ता धेरै उदाहण छन् जो विवाहित हुँदा हुँदै दोस्रो, तेस्रो सम्बन्ध बनाउँने अभिनेता–अभिनेत्रीहरु । यस्तै केही चर्चित अभिनेताका बारेमा जान्नुहोस्, जसको आफ्नी सुन्दर श्रीमती हुँदाहुँदै पनि अर्को अभिनेत्रीसँग अफेयर चलेको सुनियो । अक्षय कुमार र ट्वीकल खन्ना – अक्षय कुमार र रविना टंडनको सम्बन्ध एक समय निकै घनिष्ट थियो । दुई जनाले गोप्य र...
एजेन्सी। फिल्म ‘बाहुबली: द कन्क्लुजन’मा बाहुबलीकी पत्नी देवसेनाको भूमिका निभाएर चर्चा बटुलिरहेकी नायिका अनुष्का शेट्टीको जन्म सन् १९८१ ७ नोभेम्बरमा भएको थियो। अनुष्का अहिलेसम्म अविवाहित छिन्। अनुष्का सहित साउथ इन्डियन सिनेमाका कयौं नायिका ३० वर्ष पारिगरिसक्दा पनि अविवाहित नै छन्। अनुष्का शेट्टी कयौं तमिल र तेलुगु फिल्मको हिस्सा बनिसकेकी अनुष्...